Posted by Tranquillus | Juun 9, 2018 | Horumarka shakhsiyeed
Waad ogtahay arrintan kakan iyadoo aan isku dayin inaad ka baxdo.
Sidaa darteed si ay kuu caawiyaan, halkan waa sababta iyo sida looga baxo dadka badan.
Waxaad haysataa wax kasta oo aad ku kasbato adiga oo ka soo baxa cufka:
Waa waxoogaa sida shirkad doonaysa in ay ka soo baxdo tartamayaasheeda, dadka ka soo jeeda dadku waa in ay naftooda u muujiyaan inay yihiin shakhsi gaar ah, oo xor ah inay u fikiraan una muujiyaan naftooda.
Waxaan ku soo koobi karnaa xaqiiqada ah inaan ku jirno ballaaran ee aan ka maqneyno waxyaabaheena, nolosheena oo dhan waannu lumay.
Waxay u dhigantaa inay sameyso waxyaabo aan run ahaantii naga dhigin anaga oo aan fahamsanayn sababta aan uga bixi karno dadka badan.
Laakiin haddii dad aad u tiro badan, waa sababtoo ah waxay u xaqiijineysaa, qof kastaa wuxuu sameeya waxyaabo sidaas darteed macnaheedu waa waxa ugu fiican ee la sameeyo.
Sidee ku ogaaneysaa haddii aad qayb ka tahay qaybta?
Si aad u ogaato haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa ka mid ah qaybaha, su'aasha sahlan waa ku filan: Halkee baad ku aragtaa hal ama dhowr sano?
Haddii aanad awoodin inaad ka jawaabto su'aalkan fudud ee hab qarsoodi ah, waxaad dhab ahaantii ku jirtaa qiyaasta.
Waa dabeecadda dadka ka mid ah, ma ogaanayaan meesha ay u socdaan iyo sababta ay u socdaan.
Hase yeeshee, dadka ku jira xittaa ma haystaan ​​kantarool ku filan naftooda si ay u sameeyaan isbedel dhab ah noloshooda.
Kama qaadi karaan ficil inkastoo xaqiiqda ah inay go'aanno sameeyeen.
Enfin, dernière caractéristique : la pensée absolue. Une personne qui est dans la masse aura tendance à dire que les choses sont ainsi et que l’on n’y peut rien, c’est noir ou c’est blanc, mais pas les deux en même temps.
READ Ogow sida loo sameeyo go'aanka saxda ah
Tijaabo sahlan ayaa la sameeyey dhawr jeer oo ay cilmi-baarayaashu muujinayaan in haddii qofku ku dhaco waddada, dhibanaha wadnaha wadnaha, tusaale ahaan, iyo cidina waxay ku dadaaleysaa inay u timaaddo badbaadinta, cid kale oo kale ma sameyn doono. Waa saameyn ballaaran oo aan ku wici karno "xawaareynta".
Waa xaqiiqo murugo leh oo caddaynaysa in bulshadeenu ay u adeegsanayso shakhsi ahaanta dhibta xiriirka aadanaha.
Waa maxay ficilada lagu hirgelin karo si looga baxo masska?
Dhamaanteen annagu annagu niyadjab ayaa nagu dhex jira, haddii aanan la dagaallamayn, waxay qaadataa waxna ina saari doontaa inaynu dhalaalno.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xalal ah in laga baxo baaxada.
Waxay ka bilaabantaa adoon dhagaysan dadka kuu sheega inaadan awoodin inaad ku guuleysatid, dadkani waa sun.
Markaas waa inaad leedahay awood maskaxeed oo wanaagsan si aad uga gudubto cabsidaada.
Samee ballanqaadyo oo ku dhaji inkastoo dhammaan dhibaatooyinka keenaya.
Gaaban, habka ugu wanaagsan ee ka soo baxa cufka waa adiga dejiyaan goolwax kastoo ay tahayba, oo aad ku kalsoon tahay oo dhan.
Maxaad u baahantahay in aad ka baxdo xajka? Agoosto 24th, 2018Tranquillus
horeSidee loo abaabulaa goobta shaqada?
socdaNidaamka caafimaadka Faransiiska: ilaalinta, kharashyada, taageerada
Sida loo diyaariyo si aad u codsato kordhin